Kedu ihe bụ ROI nke Ahịa Na-eguzosi Ike n'Ihe? | Martech Zone
Kedu ihe bụ ROI nke Ahịa Na-eguzosi Ike n'Ihe?
Friday, December 15, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Anyị ebidola njikọ ọhụrụ ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa ndị ọkachamara, Bolstra.
Bolstra bụ ngwanrọ ngwanrọ (SaaS) na-eweta maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ azụmaahịa na-achọ ịba ụba ego ha na-enweta site na mbenata ọkụ na ịchọpụta ohere dị elu. Ihe ngwọta ha, site na iji omume kacha mma, na-enyere ụlọ ọrụ gị aka ị nweta nsonaazụ chọrọ nke ndị ahịa gị chọrọ.
N'ime afọ ole na ole gara aga, ka njem njem agile anyị gbanwere ma anyị na-atụle ntozu oke nke azụmaahịa azụmaahịa - ihe ngosipụta arụmọrụ nke na-aga n'ihu ịpụta bụ ahụmahụ ahịa. Nyiwe dị ka Bolstra na-etinye nyocha a pụrụ ịtụle ma na-arụ ọrụ banyere njem ndị ahịa na-eburu n'uche n'ime ụlọ ọrụ - ndị ahịa ha na-ahụkwa nsonaazụ dị ịtụnanya ugbua. Na B2B SaaS, njide ndị ahịa dị oke mkpa. Anyị na-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụ uche ohere itolite site na itinye uche na nnweta ọ bụghị na ahụmịhe, iguzosi ike n'ihe, na njigide.
Ọnụ nnweta na-aga n'ihu na-arị elu n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ka ndị na-ebipụta dijitalụ na-egbochi ndị na-ege ntị ị na-achọ iru, yabụ nlọghachi na itinye ego maka njigide na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa na-eto. Ọ bụghị na ụlọ ọrụ chọrọ ichoro ndị ahịa, mana oge ụfọdụ nkwekọrịta buru ibu na-esote ndị ahịa ugbu a ị nwere oche azụ. Ka asọmpi na nhọrọ na-ebili, na ihe ọhụụ na-adịwanye ọnụ ala, ụlọ ọrụ kwesịrị ị paya ntị nke ọma na ọganiihu ndị ahịa.
Jikọta nke a na usoro nyocha nyocha na ntanetị na mgbasa ozi mgbasa ozi, na ndị na-ere ahịa aghaghị ị paya ntị. Nwere ike imefu ọtụtụ nde na ahịa dị irè n'ịntanetị naanị ka ị tufuo ya na otu gaff nke na-efe efe. Onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ gị bụzi onye nnọchi anya ụlọ ọrụ gị ma ga-arụkọ ọrụ ọnụ na ire ahịa gị na ahịa gị iji wulite ntụkwasị obi, aha, na ikike gị n'ịntanetị.
Ndị ụlọ ọrụ na-eleda mmetụta nke njigide na uru zuru ezu anya. N'ezie, 5% mmụba na njigide ndị ahịa nwere ike ịbawanye uru n'etiti 25% na ihe ruru 125%
Ọ bụ ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa na iguzosi ike n'ihe dị mkpa nye nzukọ gị? You ma ihe njigide ndị ahịa gị bụ na ọ na - akawanye mma? You ma ihe mmetụta nke njide ndị ahịa gị nwere na akara gị?
Tags: arrbolstragbakọọnjem ndị ahịaezi ndị ahịauru ndị ahịaahịa ihe ịga nke ọmainfographicuruuru
Gong: Platform Intelligence Platform maka Otu Ahịa
Mmekọrịta: Otu ndị na-azụ ahịa si eme ka mgbasa ozi nke ndị nwe ha kwalite ụgwọ na Media na-akwụ ụgwọ